Olona efatra no maty, 19 naratra tamin'ny rivo-doza tao Istanbul
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Olona efatra no maty, 19 naratra tamin'ny rivo-doza tao Istanbul
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Tourism • Travel Wire News • Turkey Breaking News
Niady tamin'ny toetr'andro ratsy i Istanbul nanomboka tamin'ny vao mangiran-dratsy tamin'ny Alatsinainy, miaraka amin'ny haino aman-jery sosialy feno horonan-tsary mampihoron-koditra ahitana tafo simba, trano rava, hazo nianjera, fiara nivadika, ary potipoti-javatra manidina.
Araka ny fanambaran'ny biraon'ny governoran'i Istanbul, nisy tafio-drivotra mafy namely ny tanànan'i Tiorka tamin'ny Alatsinainy, nahafatesana olona efatra ary naratra mafy, fara fahakeliny, sivy ambin'ny folo.
“Mivavaka izahay mba hamindra fo amin’Andriamanitra ho an’ireo namoy ny ainy, mirary fiononana ho an’ny havany ary mirary fahasitranana haingana ho an’ireo naratra”, hoy ny fanazavana.
Teratany vahiny iray sy olom-pirenena Tiorka telo no namoy ny ainy noho ny tafio-drivotra, raha mbola naiditra hopitaly ny telo tamin'ireo sivy ambin'ny folo naratra, hoy ny fanambaran'ny manampahefana ao an-toerana.
Istanbul miady amin'ny toetr'andro ratsy hatramin'ny marainan'ny Alatsinainy, miaraka amin'ny haino aman-jery sosialy feno horonan-tsary mampihoron-koditra ahitana tafon-drivotra, trano rava, hazo nianjera, fiara nivadika, ary potipoti-javatra manidina.
Nakatona ho an'ny fifamoivoizana an-dranomasina ny andilan-tsambo Bosphorus ary naato ny serivisy sambo.
Ny rivo-doza ihany koa dia nahatonga ny fanafoanana ireo sidina maromaro mankany Istanbul.
Tsy afaka mipetrapetraka ny fiaramanidina Seranam-piaramanidina Istanbul, ary averina mankany Ankara sy Izmir.
Tonga ihany koa ny tatitra momba ny fahasimbana avy amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena, miaraka amin'ny fampitandremana momba ny oram-baratra tavela amin'ny talata.